Ixabiso eliphantsi leHopper yokulinganisa umatshini wokuPakisha abaThengi kunye neFektri | YiZheng
Yintoni umatshini wokuPakisha ngokuPheleleyo we-Double Hopper?
Inkqubo ye- Umatshini wokuPakisha oPhindayo oBini umatshini wokupakisha ozenzekelayo ulungele ingqolowa, iimbotyi, isichumiso, imichiza kunye namanye amashishini. Umzekelo, ukupakisha isichumisi segranular, umbona, irayisi, ingqolowa kunye nembewu yegranular, amayeza, njl. Ngokweemfuno zakho, uluhlu olulinganisiweyo lobunzima bephakheji yi-5kg ~ 80kg. Ubungakanani bokugcwalisa kunye nokupakisha umatshini ubukhulu becala ubunjwe ngamacandelo amane: ubunzima bokuzenzekelayo, ukuhambisa izixhobo, izixhobo zokutywina ibhegi kunye nolawulo lwekhompyuter. Inempawu zesakhiwo esifanelekileyo, inkangeleko entle, ukusebenza okuzinzileyo, ukonga umbane kunye nobunzima obuchanekileyo. Injini ephambili yamkela amandla omoya ophindaphindiweyo, umlinganiso wesilinda-mbini, itekhnoloji yolawulo lwenguqulelo yedijithali eqhubayo, itekhnoloji yokulungisa isampulu kunye netekhnoloji yokuphazamisa ukuze kufezekiswe imbuyekezo kunye nokulungiswa.
Uyilo Elungiselelweyo njengeemfuno zakho ezithile
Izinto zokukhetha umatshini njengemfuno yakho: Isinyithi seCarbon, intsimbi engagqwaliyo engama-304 / 316L, okanye izinto zoqhakamshelwano eziluhlaza ziyintsimbi engenasici.
Iimpawu zoMatshini wokuPakisha oPhindayo oBini
Ukucaciswa kwepakethe ye-1 kulungelelaniswa, ukusebenza kulula kakhulu phantsi kweemeko zokusebenza.
Zonke iindawo ezidibene nezinto zenziwe ngentsimbi engama-304.
Ubunzima bephakheji iyonke kunye nenani leebhegi ezibonisiweyo.
Ukondla 4.Iyilelwe ngokukodwa kunye nokulinganisa, ukuxhwaleka ngaxeshanye kunye nokothula. Igcina isinye kwisithathu sexesha lokusebenza, isantya sephakheji siyakhawuleza, kwaye ukuchaneka kokupakisha kuphezulu.
5.Using abenzi boluvo kwamanye amazwe, actuators amazwe womoya, umsebenzi oluthembekileyo kunye nokugcinwa elula. Ukuchaneka kwemilinganiselo kudityaniswa okanye thabatha amawaka amabini.
Uluhlu olubanzi lwe-6.Wide, ukuchaneka okuphezulu, kunye nomatshini wokuthunga ohambisa izinto onokuthi uphakanyiswe kwaye wehliswe etafileni, umatshini omnye unenjongo ezininzi kunye nokusebenza ngokukuko.
Iphindwe kabini i-Hopper yokuPakisha umatshini weVidiyo
Ukuphindwa kabini kweMilinganiselo yokuPakisha kweModeli yokuPakisha
Uluhlu lokulinganisa (KG)
Ixabiso leMicroscopic Index (kg)
.100 Processing Elungiselelweyo ngokweemfuno zomsebenzisi
Amagqabantshintshi Oluzenzekelayo Packaging Machine
Umatshini wokuthunga, ukubala ngokuzenzekelayo, ukucoca intambo ye-infrared, umatshini wokususa umda, unokukhetha ngokweemfuno zabathengi Umatshini wokuchumisa ojikelezayo
Iimveliso ezinxulumene noko>
Intshayelelo Yintoni Umatshini wokuPakisha ngokuzenzekelayo? Umatshini wokuPakisha weSichumiso usetyenziselwa ukupakisha isichumiso sephepha, esenzelwe ukupakisha izinto ezinobungakanani. Ibandakanya uhlobo lwebhakethi eliphindwe kabini kunye nohlobo lwebhakethi olunye. Umatshini uneempawu zesakhiwo esidibeneyo, ufakelo olula, ukugcinwa ngokulula, kunye nokuphakama kakhulu ...
Intshayelelo Yintoni i-Automatic Dynamic Fertilizer Batching Machine? Izixhobo ezizenzekelayo zokuChumisa isichumisi sisetyenziselwa ubunzima obuchanekileyo kunye nomthamo ngezinto ezinobuninzi kumgca wokuvelisa isichumisi ukulawula inani lokutya kunye nokuqinisekisa ukwenziwa ngokuchanekileyo. ...
Umgquba ozijikelezileyo wasekhaya
Isitovu somoya eshushu